အိတ်ဆောင်ကွန်ပျူတာ-honeywell - Planet IT Myanmar ကို ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၊ စမ်းချောင်း၊
Honeywell SCANPAL EDA51K Enterprise Mobile Computer
EDA51K သည် 1.8 GHz Octa-core Qualcomm® Snapdragon ™ processor ကို အခြေခံ၍ မြန်နှုန်းမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Android Q တွင် 3G + 32G (standard) နှင့် 4G + 64G (high-end) memory options များပါ ၀ င်သည်။ ...
EDA51 Laptop သည် Android 10 operating system ကို အခြေခံ၍ ၅ လက်မမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အားကောင်းသော 4000mAh lithium-ion ဘက်ထရီ၊ အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်သောဘက်ထရီ၊ 13MP ကင်မရာ၊ Bluetooth 4.2 ချိတ်ဆက်မှု၊ USB အားသွင်းစက် ...
Honeywell Mobile Computer CK65
Honeywell မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာ CK65 ဘားကုဒ်စကင်နာ
၎င်းသည်အိတ်ဆောင် PDA အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
1D နှင့် 2D ဘားကုဒ်များကိုဖတ်သောအိတ်ဆောင်စာဖတ်သူဖြစ်သည်။
Honeywell ScanPal EDA61K Rugged PDA
Honeywell ScanPal EDA61K သည်သယ်ဆောင်ရလွယ်သောကွန်ပြူတာတစ်လုံးဖြစ်သည်။ မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပဂိုဒေါင် လက်လီ၌ရှည်လျားသောဘက်ထရီသက်တမ်း ergonomically ဟန်ချက်ညီဒီဇိုင်းနှင့်အတူ တစ်နေကုန်အသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည် ...
Honeywell Mobile Computer CT60
Mobility Edge platform ရှိ CT60 မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာ
Copyright © 2022	Planet IT Myanmar ကို ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၊ စမ်းချောင်း၊ All rights reserved. Theme: Flash by ThemeGrill.	Powered by WordPress